15 Waxqabadka Photoshop ee Wax ka bedel Sawiradaada | Abuurista khadka tooska ah
Melissa Perrotta | | Design Graphic, Photoshop, Khayraadka
Haddii aad raadineyso inaad kordhiso waqtigaaga shaqada, ha ku lumin waqti ku celcelinta isla talaabooyinkaas si aad u gaarto natiijada ugu dambeysa ee la filayo. Isticmaal ka fiican falalka Photoshop gaar ah oo kaa caawin doona inaad ku siiso sawiradaada qaabka aad raadineyso.
Barnaamijka tafatirka ee ugu muhiimsan Adobe, "Photoshop" wuxuu leeyahay luuqad barnaamij aad u awood badan. Tani way kuu ogolaaneysaa duub talaabooyinka ficil kadib si toos ah ugu celi qaar ka mid ah waxyaabaha aad doorato. Marka, kaliya ma duubi kartid ficilladaada, laakiin sidoo kale waad soo dhoofsan kartaa kuwa kuwa kale abuureen.
Si aad u isticmaasho ficiladan, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad kala soo baxdo ficillada aad ugu jeceshahay qaabka aad bixiso ka dibna ka dhaqaaji Photoshop.
2 Waxqabadka HDR
3 Saacad Dahabi ah
5 Madow iyo caddaan
6 Filter buluug
7 Qorrax soo bax
8 Boorka hawada
9 HDR adag
10 Si ay u noqoto habeen
13 Waxqabadyada Isdhaafsiga
14 Tilmaamayaasha midabka
15 Deegaanka xunxun
Boggan wuxuu bixiyaa xirmo ah 40 wejiga duotone si aad ugu dari karto midabada firfircoon sawiradaada.
Ficilkan HDR ayaa ogolaanaya dooro xoojinta kaas oo aad rabto inaad ka soo horjeeddo midabada.
Saacad Dahabi ah
Qorraxdan qorraxdu waxay Lightroom Waxay ku siin doontaa sawiradaada midab aad arki karto marka qorraxdu dhacdo.
Markaad taa raadiso xagaaga xagaaga kuwaas oo bixiya midabbada hore ee xulashada ugu fiican ayaa ah tallaabooyinkaan.
Ficil aad muhiim ugu ah naqshadeeye iyo sawir qaade kasta. Iyada oo hore loo dhigay sawir madow iyo caddaan ah waxaad awoodi doontaa inaad si dhakhso leh u shaqeyso sawiradaada monochrome.
Shaandheeye gaar ah oo lagu siinayo sawirradaada taabanaya shineemo adag.
Ficilkan waxaad ku siin kartaa sawirradaada taabasho dhalaal iyo kuleyl. Waxay ku habboon tahay sawirrada nooca sawirka ah iyo haddii ay ku jirto jawi bannaanka ka wanaagsan.
Tani waa ficilka ugufiican hadaad rabto inaad dib uhesho a qaabka guridda ee midabada la dhaqay. Way kufiican tahay abuurista aragtida boodhka hawada.
Hadaad rabto inaad xoojiso sawiradaada muujinta midabka iyo qeexida geesaha waad isticmaali kartaa ficilkan HDR ee ka socda Shutterpulse.
Si ay u noqoto habeen
Xidhmo aad u badan
Ficilkan Photoshop waxaad ku dari kartaa a ceeryaamo sawiradaada.
Tani waa xirmo ay ku jiraan dhowr ficilada midabka iyo iftiinka dillaaca caadadii la dhisay.
Hawlgalku waa saameyn u adeegta midabada kala geddisan helitaanka isku-dar ah oo aad u xiiso badan.
Muuji midabada ee sawiradaada noocaan bilaashka ah ee Waxqabadyada Dareenka Daabacada.
Haddii aad rabto inaad ku siiso sawirradaada taabasho xumaan ah, ficilkan ayaa ku habboon. Waxaa loo sameeyay si aad sawiradaada u siiso a qaab mugdi ah, cabsi yar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » 15 Falalka Photoshop si aad wax uga beddesho sawiradaada
5-ta mashruuc ee Kickstarter ee # DíadelaEarth